एन्जेलाको फाउन्डेसनले जन्माएको प्रश्न
घटना र विचार (न्युज डेस्क)9years ago December 1, 2010
एक उद्यमीका रूपमा परिचय बनाएकी सिङ्गापुरे महिला एन्जेला चेङले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा ‘राजा वीरेन्द्र फाउन्डेसन’ नामक एनजीओ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने समाचार सार्वजनिक भएको छ । सुरुमै ३५ करोड रकम सो फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने एन्जेलाले बताएबाट ‘केबीएफ’को उद्देश्य लरतरो छैन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा काम गरिने उद्देश्य सार्वजनिक गरिएबाट नेपालजस्तो मुलुकका लागि सो फाउन्डेसन उपयोगी नै बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा त्यत्रो धनराशि लगाएर सिङ्गापुरकी महिला किन नेपालमा ‘सेवा’ गर्न उद्यत् भइन् भन्ने कुरालेअचाहिँ कुतूहल जन्माएको छ । दिवङ्गत राजा वीरेन्द्रप्रति एन्जेलाको यो आस्था र प्रेम कसरी ? उक्त संस्थाको संरक्षकका रूपमा उनले पूर्वयुवराज पारसका सुपुत्र हृदयेन्द्रलाई प्रस्ताव गरेकी छिन् । यसैगरी सदस्यहरूमा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्री विद्या भण्डारीदेखि उपराष्ट्रपति परमानन्द झासम्मको नाम अगाडि सारिएबाट हामीजस्ता सर्वसाधारणको मनमा गजबको खुल्दुली जन्माएको छ । कमल थापा, आरजु राणा, सेनापति छत्रमान गुरुङ, प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीको नाम पनि फउन्डेसनको सम्भावित सदस्यका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यी नामहरू देख्दा संस्था कसरी सुचारु होला भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ । जे होस्, नेपाली जनताबीच लेकप्रिय राजा वीरेन्द्रको नामबाट नेपालीकै हितमा काम हुनु खुसीकै विषय हो । संस्थाले काम सुरु गर्न नपाउँदै ‘सिङ्गापुरमा पूर्वयुवराजलाई सघाउने महिला’का रूपमा प्रचार गरेर फाउन्डेसनलाई रहस्यमयी तुल्याउने कसरत सुरु भएको पनि देखिएको छ । तर, हरेक कुरालाई रहस्यमयी बनाउन खोज्ने, नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने र राम्रो कामलाई पनि व्यक्तिविशेषसँग जोडेर औंला ठड्याउने कार्य हामी नेपालीमा एउटा कुसंस्कारकै रूपमा विकसित भएको छ । यस्तो रोगबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ । एन्जेलाको संस्था विशुद्ध सामाजिक सेवाका लागि क्रियाशील रहला या अरू नै अमूक उद्देश्यका लागि पनि सक्रिय होला भन्ने सवालमा रुमलिनुभन्दा पनि यसले के-कस्ता काम गर्ला र यसले अघिसार्ने सकारात्मक कदममा हामीले कसरी कदम मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
– शालिकराम सिग्देल र प्रमोद प्रधान, काठमाडौं
अपराधी सार्वजनिक गरियोस
फरि्पङको हात्तीवन जङ्गलमा नेपाल प्रहरीले हालै ठूलो परिमाणमा चरेस फेलापारेको समाचार सुन्दा प्रहरी सक्रियतालाई साधुवाद भन्न मन लाग्यो । कतै विदेश सप्लाई गर्न लागेको अनुमान गर्न मिल्ने ढङ्गले प्याकिङ गरिएको भनी प्रहरी सूत्रले नै घटना सार्वजनिक गरेबाट त्यो चरेस कुनै ठूलै तस्कर गिरोहले नेपालबाट बाहिर पठाउन खोजेको बुझिन्छ । त्यो अवैध सामान सँगसँगै केही स्थानीय युवाहरूलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा लिएको बताइएको थियो । तर, त्यसबारे थप यथार्थ किन सार्वजनिक गरिएन ? हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूबाट के कुरा खुल्यो ? आखिर त्यो चरेस तस्करीमा को-को संलग्न रहेछन् । यो कुरा प्रहरीले स्पष्ट पारोस्, यसबाट नेपाल प्रहरीको छवि अझ उचो हुनेछ । त्यसरी बरामद गरिएको सामान नष्ट गरिन्छ या कहाँ लगेर बुझाइन्छ ? यसबारे पनि बताइयोस् ।
– सञ्जीव चौधरी, हाल : काठमाडौं